नेपाल आज | दमका रोगीले के खाने? जान्नुहोस्
दमका रोगीले के खाने? जान्नुहोस्
बिहिबार, १६ जेठ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
काठमाडौं । दीर्घ दमरोगीमा सास फेर्दा सक्रिय हुने मांसपेसी विभिन्न कारणले कमजोर हुँदै जान्छन् । खाना खाँदा दम बढ्नु, पाचन प्रणाली कमजोर हुनु, खानामा रुचि घट्नुजस्ता कारणले बिरामीले आवश्यक मात्रामा खाना खान सक्दैनन् । फलस्वरूप शरीरसँगै प्रतिरोधी क्षमतासमेत कमजोर हुँदै जान्छ । जसले गर्दा रोग निको हुन समय लाग्ने हुन्छ । तसर्थ, दम रोगका बिरामीले खानपानमा विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । उनीहरूका लागि यस्तो खानपान आवश्यक छ ।
शरीरमा पानीको मात्रा कम भएमा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले, प्रशस्त मात्रामा झोलिलो खानेकुरा खाँदा शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन पाउँदैन । त्यस्तै, नुन आवश्यक मात्रामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । यो जानकारी नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।